RSS: Mee ka nri gi rie | Martech Zone
RSS: Mee ka nri gị rie
Fraịde, Jenụwarị 5, 2007 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
N'ihi ọbịbịa nke ihe nchọgharị ọhụrụ, enweghị m nchegbu banyere itinye nke m RSS jikọta n'ime ọdịnaya saịtị m. Ana m amalite ichegharị nke ahụ.
Ọ bụrụ na ịmabeghị mbụ, ihe nchọgharị ọhụrụ a nwere ike ịchọpụta ihe na-akpaghị aka RSS Nri ma ọ bụrụhaala na amata ya n'ime nkụnye eji isi mee nke ibe. Na ịpị na RSS akara na - ebute gị 'ịdenye aha na ndepụta ahụ' site na ihe nchọgharị gị. Yabụ mgbe ịhọrọ ndepụta na ihe nchọgharị gị, a ga-ezute gị na ndepụta nke akụkọ ndị ọrụ dị na ntanetị.
N'ime nkụnye eji isi mee nke saịtị m, enwere m koodu ndị a:
Ihe nchọgharị ahụ na-ahụ koodu ahụ na-akpaghị aka ma na-enye ihe ngosi na enwere ike ịdebanye aha nri na:
Tupu ntọhapụ nke Internet Explorer 7, Microsoft zutere ndị mmepe ihe nchọgharị ndị ọzọ ma ha kpebiri na akara ngosi ụwa maka RSS ga-
Kemgbe ọnwa isii gara aga, atụkwasara m obi RSS ndenye aha maka folks ịdenye aha na ndepụta m. Otú ọ dị, m mere ule na nso nso a ebe m tinyere RSS njikọ na ụkwụ nke ibe m niile. Maa amụma? N'ime ụbọchị ole na ole, ndebanye aha m na-agbanye ihe dịka 20%! (M na-eji Feedpress soro).
Amaara m na nke a abụghị ezigbo sayensị, mana m ga-akwado ka ndị na-agụ akwụkwọ nwee nke ha RSS Ihe ntinye akwukwo a choputara nke oma ma diri ndi guru akwukwo gi ndi n’eji aru oru ndi ozo n’enyeghi ya ihe ichoro site na koodu isi gi.
Tags: ngwandepụtandepụta nkụnye eji isi meenjikọ nrionye na -eri nrirel ọzọrss nrirss nkụnye eji isi meerss xmlXML
WordPress: Ihe ntinye 1 nke ọ bụla ga-enwe
Jenụwarị 5, 2007 na 7:19 PM
Ihe ọzọ mere ị ga - eji mee nke a: mgbe ụfọdụ ndị na - agụ akwụkwọ chọrọ ijikọ na ndenye aha gị. Mgbe m gụrụ onye m chọrọ ịdenye aha, m ga-etinyekarị ha na njikọ m maka ụbọchị ahụ na ndetu (Edebere) jikọtara na nri ha. Na Firefox 2 enwere m faili nri ahaziri ka m gaa FeedDemon, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị njikọ na ibe ahụ enwere m ike ịpị aka nri ma detuo njikọ ahụ, m ga-elele isi mmalite iji nweta ya.
Jenụwarị 5, 2007 na 8:08 PM
Nke ahụ bụ otu m si debanye aha na blog gị site na akara ngosi RSS na ala. Anaghị m a toa ntị na ihe ndị na-egosi na ihe nchọgharị adreesị ma eleghị anya kama ọ bụ mgbe ị na-eji ihe nchọgharị; nke anaghị adịkarị, M na-achọkarị akara ngosi.
ihe ọzọ icheta yana ọ bụghị mmadụ niile ga-abịa na blọọgụ gị site na ihe nchọgharị. Fọdụ ga-abịa site na njikọ ha na ndị na-abụghị ndị nchọgharị RSS ahịa na nnọọ adịkarịghị ga-wuru ihe nchọgharị ndị ahịa ịchọpụta otú a…
Jenụwarị 5, 2007 na 8:12 PM
Ọ bụ njikọta akara ngosi RSS m na-edebanye aha na - dịka m na-adịghị a paya ntị na ogwe osisi maka nke a gbakwunyere m na-adịkarịghị denye aha site na ihe nchọgharị.
M bi na onye na-agụ RSS m yana dịka ụdị njikọ m niile na-achọta ma gbakwunye ya ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-anọ naanị ndị ahịa RSS nwere ụdị atụmatụ ahụ.
Doug, M n'ụzọ zuru ezu na ị na nke a! Naanị post na ọkwa ọhụrụ RSS bọtịnụ nke 🙂
Ezi okwu Sterling, m na-eme otu ihe mgbe ụfọdụ.
Jenụwarị 6, 2007 na 7:59 PM
Ezi ndụmọdụ, enwere m ya ma ugbu a.
Daalụ maka post a. Anọ m onye na-ede blọgụ ọzọ na-atụle isiokwu a n'ọnwa gara aga ma ana m eche mgbe niile ebe bụ ebe kachasị mma iji tinye bọtịnụ ịdenye aha. Ugbu a na saịtị m naanị m nwere akara ngosi RSS na ogwe ihe nchọgharị na ụkwụ, ma echere m na otu n'ime sidebar ma ọ bụ nkụnye eji isi mee ga-aba uru, dabere na nkwupụta m gụrụ ebe a.
Jenụwarị 11, 2007 na 10:48 PM
Enwere m nke m n'elu, mana ugbu a, m na-eche ihe kpatara na anaghị m etinye ya na ala n'ihu.